China LEDL730 LED AC / DC fahazavana fandidiana tsy misy alokaloka avy amin'ireo mpanamboatra orinasa sy mpamatsy | Wanyu
LEDL730 LED AC / DC fahazavana fandidiana tsy misy alokaloka avy amin'ny orinasa
Ny jiro fandidiana LED730 dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina.
LEDL730 dia manondro fahazavana fandidiana.
Ho an'ny efitrano fandidiana miaraka amina boaty manadio, ny karazana felam-boninkazo mijoro dia afaka misoroka ny fikorianan'ny rivotra ary mampihena ny faritra mikorontana amin'ny fikorianan'ny rivotra laminera. Felam-boninkazo telo, enim-polo osram takamoa, manome ny hazavan'ny 140,000lux sy maripana miloko maksimum 5000K sy max CRI an'ny 95. Ny masontsivana rehetra dia azo ovaina amin'ny ambaratonga folo amin'ny tontonana fanaraha-maso ny efijery LCD. Ny tahony dia vita amin'ny fitaovana vaovao, mahatohitra amin'ny hafanana ambony sy ny tsindry ambony. Omeo sandry roa amin'ny lohataona, lafo vidy ary lafo vidy.
1. Rod Bent Mobile Base
Endrika kanto, mifanaraka amin'ny fitsipiky ny mekanika injeniera, ny toerana misy azy ary tsy mihetsika. Ny drafitra namboarina dia azo atao arakaraka ny halavan'ny dokotera.
2. Mety amin'ny efitrano fiasan'ny valindrihana ambany
Rehefa tsy dia avo ny haavon'ny gorodon'ny efitrano fandidiana, na tsy mahafeno ny fepetra apetraka amin'ny jiro miasa amin'ny valindrihana. Ny jiro miasa amin'ny finday dia mora mihetsika ary afaka mahafeno ny fepetra takian'ny jiro fandidiana ihany koa.
3. Tanana famonoana otrikaretina mafy
Ny jiro fandidiana dia famolavolana mihidy tanteraka. Ny fonenana azo esorina dia mahatohitra ny mari-pana avo sy ny tsindry avo izay mahafeno tanteraka ny fepetra famonoana otrikaretina isan'andro.
4. Temperature miloko tsara kokoa
5. Manitsy mora
Ny mari-pana amin'ny loko, ny hamafin'ny jiro ary ny fanondroana loko ny jiro fandidiana dia azo ovaina miaraka amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso LCD.
6. Rafitra miverina
Jiro fandidiana LEDL730
Previous: Ny hazavana fandidiana LEDL700 LED gorodona miorina amin'ny mari-pahaizana CE
Manaraka: LEDL740 LED alokaloka OT tsy azo aleha miaraka amin'ny Back-up batterie
LEDD260 LED hazavana fanadinana valindrihana valindrihana ho an'ny Ani ...
DD500 / 700 valindrihana kambana Halogen Twin Dome amin'ny fandidiana ahy ...
LEDD730740 Ceiling LED LED Head Head Fitsaboana ...
Jiro fandidiana azo esorina amin'ny halotra DL500 amin'ny halogen